Su’aalaha aan badanaa la iswaydiinin ee madaxweyne Putin – Bulsho News
Su’aalaha aan badanaa la iswaydiinin ee madaxweyne Putin
Waa la cusbooneysiiyay 58 Daqiiqadood ka hor
Putin muxuu la muusoodaa? Miyuu dhintay? Trump miyuu jecel yahay?
Vladimir Putin ayaa sii ahaan doona madaxweynaha Ruushka tan iyo sannadka 2024ta, waxaana aad loo hadal hayaa go’aannadisa ku aadan Ukriane gaar ahaan markii uu shalay amray cidammadisa inay galaan bariga Ukriane. reer galbeedka ayaa aau hadal haya arrintani iyo tallaabda ay ka qaadi karaan Putin iyo xukuumadiisa.
Inkastoo wax badan laga yaqaanno hogaamiyaha Ruushka, haddana waxaa jira waxyaabo badan oo ay dadku rabaan in ay ka sii ogaadaan.
Tijaabo ahaan ayaan dhawr su’aalood oo Putin ku saabsan ugu qornay Google, si aan u fiirino bal waxa uu talo ahaan noogu soo bandhigo. waxaana go’aansanay in aan idiinka jawaabno kuwa aan inta badan la soo hadal qaadin.
Maya, inta aan ka warqabno. Isaga iyo xaaskiisii ay 30ka sano is qabeen ee Lyudmila waxay furiinkooda shaaciyeen bishii Juunyo ee 2013kii. Inta aysan ku dhawaaqinna dhif iyo naadir ayay ahayd in meel fagaare ah lagu wada arko muddo billooyin ah.
Waxaa jira warar la isla dhexmaray oo sheegaya in Putin uu shukaansado Alina Kabaeva oo siyaasiyad ah horayna ciyaaraha fudud uga soo qaybqaadatay, laakiin ma jiraan wax tilmaamaya in wararkaasi ay run yihiin.
Maya, haddii aysan wax isbadalin tan iyo bishii Janaayo, markaas oo sawirkan la qaaday.
Mushahaarkiisa rasmiga ah wuxuu sannadkiiba u dhigmaa 112,000 oo doolar, sida ku xusan macluumaad ay diyaarisay Guddiga Doorahsada ee Ruushka ka hor intii aysan doorashadani dhicin.
Laakiin labo sano ka hor masuul waaxda maaliyadda ee Maraykanka ka tirsanaa ayaa BBC-da u sheegay in Putin uu yahay nin musuqmaasuq ah, uuna sannado badan qarinayay hantidiisa.
“Waxaan aragnay in uu saaxiibbadii iyo dadka ay isu dhaw yihiin uu maalqabeen ka dhigo isaga oo adeegsanaya hantida dawladda, kuwa uusan saaxiibbadii u arkinna uu faquuqo,” ayuu yiri Adam Szubin.
Aqalka looga arrimiyo Ruushka ee Kremlin-ku wuxuu eedaymahaas ku tilmaamay “mala awaal cad”.
Sikastaba ha ahaatee qoraal aan rasmi ahayn oo CIA-du leedahay ayaa 2007dii sheegay in hantida shaqsiga ah ee Putin ay ku dhawdahay 40 bilyan oo doolar, qof wax falanqeeya oo naqdiya Donald Trump ayaa sheegay 2012kii in laga yaabo in hantidiisu ay gaartay 70 bilyan, taas oo ka dhigi lahayn ninka ugu taajirsan adduunka.
Maya – guushiisa doorashada ayaa sidaas tilmaamaysa wuuna nool yahay.
Inkastoo aan sidaas niri, haddana xaaladdiisa caafimaad ayaa la isla dhexmaray sannadkii 2015kii, ka dib markii aan fagaare lagu arkin 10 maalmood.
Miyaa la afgambiyay? miyuu dhintay? ma ilmo kale ayaa u dhashay oo aabo ayuu noqday? arrimahaas oo dhan ayaa la is waydiiyay, laakiin markii uu madaxweynuhu soo muuqday wuxuu yiri “nolosha waa lagu caajisi lahaa haddii aysan jirin wararka la isla dhexmarayo”.
Muxuu Putin la muusoodaa?
Inagama duwana inaga: oo marka aad faraxsan tahay muusood ayaad ku muujisaa.
Maxaa si gaar ah uga qosliya haddii aad leedahayna – bal ka warran markan uu eydiisa barafka kula dheelayo?
Putin iyo aydiisa Buffy iyo Yume
Suuriya aad muhiim ugu ah Ruushka istaraatiijiyad ahaan, wuxuuna halkaas ku leeyahay labo saldhig oo milatari. Xukuumadda Bashaar Al Asadna wakhti dheer ayay xulafo muhiim ah la ahayd Ruushka.
Markii uu Suuriya dagaalku ka qarxay 2011kiina, Ruushku wuxuu tageeray Bashaar Al Asad, laakiin dagaalka faraha lama uusan galin wixii ka horreeyay 2015kii.
Ku luglahaanshihii Ruushkuna wuxuu dhaliyay labo ujeeddo oo kala ah in uu xukunka ku sii hayay Assad iyo bar uu ku suntay masraxaha caalamka, isaga oo xaqiijinaya in Maraykanku uusan si sahal ah danahiisa oo dhan uga fushan karin gobolka.
Maya, laakiin labo gabdhood ayuu leeyahay waxaana la kala dhahaa Katerina iyo Maria.
Wax badan lagama yaqaanno, Putin-na wax badan kaaga sheegi mahayo, laakiin baaritaan ay samaysay wakaaladda wararka ee Reuters sannadkii 2015kii ayay ku ogaatay in Katerina iyo ninkeedu ay maalqabeen yihiin.
Ingiriis miyuu ku hadlaa?
Haa, waxaa la duubay isaga oo si wanaagsan ugu hadlaya Ingiriis, Dmitry Peskov oo ah afhayeenkiisana wuxuu sheegay in Putin uu saxo turjumaannada haddii aysan si wanaagsan u turjumin Ingiriiska.
Taasi waa su’aal xiiso badan.
Saddex iyo toban ruux oo Ruush ah oo uu jiro nin ay Putin isu dhawaan jireen ayaa lagu soo oogay in ay isku dayeen in ay saamayn ku yeeshaan doorashadii Maraykanka ee 2016kii, iyaga oo taageeraya Trump iyo Bernie Sanders oo mar u sharaxnaa xisbiga Dimuqraadiga.
Laakiin xaqiiqatan Putin ma jecelyahay Trump? taas waxaa ka jawaabi kara madaxweynaha Ruushka.
miyuu mamnuucay matalaadiisa?
Arrintaas ayaa lagu warramay sannadkii 2015kii, balse taas baddalkeeda waxay u muuqatay soo jeedin ee mamnuucid toos ah ma ahayn.
Laakiin intaas ka dib wasiirka cadaaladda ee Ruushka ayaa ku dhawaaqay in sawirkan hoose iyo kuwa kale ee waxyar uun laga badalay ay ula dhaqmi doonaan “alaab argagixiso”.